OpenWrt 19.07 inogadziridzwa yakaburitswa nerutsigiro rweWPA3 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
OpenWrt 19.07 inogadziridzwa yakaburitswa nerutsigiro rweWPA3 uye nezvimwe
Munguva pfupi yapfuura nhau dzekuburitswa kwe iyo nyowani nyowani ye VhuraWrt 19.07 mariri zvitsva zvinowedzerwa Izvo zvine rutsigiro rweiyo nyowani WPA3 protocol inomira pamwe nerutsigiro rwemidziyo mitsva.
Kune avo vasingazive OpenWrt vanofanira kuziva izvozvo iyi firmware yakavakirwa pakugovera linux que es inoshandiswa mumidziyo yakaita seyako mairaira. Kuvandudzwa kweOpenWrt kwakatangwa kukwidziridzwa nekuda kweye GPL rezinesi, izvo zvakamanikidza vese avo vagadziri vakagadzirisa nekuvandudza kodhi, kuti vaiburitse uye vape zvakanyanya muprojekiti mune zvese.
Zvishoma nezvishoma software yakura uye kune zvinoitwa maficha izvo vamwe vazhinji vagadziri vezvigadzirwa zvekushambadzira zveasina-nyanzvi chikamu vasina, senge QoS, VPN uye zvimwe zvinhu zvinopa OpenWrt mudziyo une simba chaizvo uye wakasiyana-siyana, yakakodzera kushandisa Hardware uko OpenWrt inomhanya kwete chete kuzvishandisa semarairi, asi semafaira faira, P2P node, WEBcam maseva, firewall kana VPN masuo.
OpenWrt inotsigira akawanda mapuratifomu uye maumbirwo Uye ine system yekuunganidza iyo inofambisa nyore muchinjika-kuumbiridza, iyo inosanganisira akati wandei mativi mairi, iyo inofambisa kugadzirwa kwefirmware kana dhisiki mufananidzo yakagadzirira uye yakagadzirirwa kune mamwe mabasa neanodiwa seti yepamberi-yakaiswa mapakeji.
1 Nhau huru dzeWorldWrt 19.07
1.1 Dhawunorodha vhezheni itsva yeWorldWrt 19.07
Nhau huru dzeWorldWrt 19.07
Sezvo vhezheni yapfuura ye18.06.0 pave paine mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu neshanu uye rutsigiro rwe Hardware rwakawedzera kune ese mapuratifomu akatsigirwa izvo izvozvi mune iyi vhezheni itsva yeOverWrt 19.07 yakapihwa kernel vhezheni ye Linux 4.14.162.
Pamusoro peizvi, a yezvinhu zvikuru yekusunungurwa uku ndekweie yakawedzera rutsigiro rwe isina waya yekuchengetedza tekinoroji WPA3, iyo inopa chengetedzo kubva kupassword yekufungidzira kurwiswa sezvo isingatenderi password kufungidzira mune isingaite modhi uye SAE yekusimbisa protocol inoshandiswa.
Nokutadza WPA3 rutsigiro harisati ragoneswa y inoda kuiswa kwemamwe mapakeji zviri hostapd-openssl kana hostapd-wolfssl kugadzira poindi yekuwana uye wpa-kukumbira-kuvhura kana wpad-kuvhura kushanda mutengi modhi.
Nekudaro, haazi ese maLuCI mafomati akagadziridzwa kuita iri basa uye kana paine matambudziko, zvinokurudzirwa kushandisa iyo luci-compat package.
Nezve kutsigirwa neiyi vhezheni itsva Tsigiro yemapuratifomu anotevera amiswa : adm5120, adm8668, ar7, au1000, ixp4xx, mcs814x, omap24xx, ppc40x, ppc44x. Zvakare yekutanga rutsigiro yakaunzwa ye chikuva chitsva ath79 inotsiva ar71xx uye inosuma kushandiswa kweMuti Mudziyo.
Uye iyo ath79 uye ar71xx inogona zvakare kushandiswa mubazi reWorldWRT 19.07, asi mune imwe yeshanduro dzinotevera, rutsigiro rwear71xx rwuchamiswa, nepo rutsigiro rweAth79 rwuchipihwa kungangoita mazana maviri emidziyo inoenderana neMIPI 200K processor.
Ehezve, kune mamwe mavhezheni matsva emapakeji mazhinji, senge, hostapd 2.9, dnsmasq 2.80, dropbear 2019.78, busybox 1.30.1, gcc 7.5.0
Pakupedzisira, imwe yeshanduko inomira pachena mu shambadziro ndeyekuti szvishandiso zvakawedzerwa kuti zviongorore mabhakuki uye kugadzirisa zviratidziro zvehunyanzvi kuSysupgrade.
Zvekururamisa kwakaitwa, shanda pane network network, isina waya yekumisikidza uye zvakare pane DHCPv6 mutengi uye server, pamwe neiyo maneja maneja, iyo system meseji bhazi, iyo yakadzamidzirwa webhu server, uye yekumisikidza manejimendi raibhurari.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve ruzivo rwekuburitswa kutsva kwe firmware OpenWrt 19.07 unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunorodha vhezheni itsva yeWorldWrt 19.07
Iyo inovaka yeiyi nyowani vhezheni yakagadzirirwa 37 mapuratifomu akasiyana, kubva maari ekuvandudza mapakeji anogona kuwanikwa kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » OpenWrt 19.07 inogadziridzwa yakaburitswa nerutsigiro rweWPA3 uye nezvimwe
Chimwe chinhu zvakare ndechekuti iyo shanduro yeSpanish yakagadziridzwa zvakanyanya. Thanks kwandiri ???
Ungashandisa ZFS paLinux kana Linus Torvalds ikakuudza iri zano rakaipa?